သစ်မွှေး အမျိုးအစား နှင့် မြန်မာ့သစ်မွှေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သစ်မွှေး အမျိုးအစား နှင့် မြန်မာ့သစ်မွှေး
သစ်မွှေး အမျိုးအစား နှင့် မြန်မာ့သစ်မွှေး
Posted by Wai Aung Chan Myo on Feb 8, 2012 in Copy/Paste |2comments
 သစ်ပင်၏အသားထဲမှ အမွှေးရနံ့ထွက်သော အပင်ကိုမဆိုလိုပါ။
 သဘာဝအတိုင်းသော်၎င်း၊ ဆေးသွင်းခြင်းဖြင့်သော်၎င်း ပင်စည်အတွင်းသားထဲ၌ ရှားပါး၊ အဖိုးတန်သည့်၊ ထူးကဲသော မွှေးရနံ့ထွက်လျက်၊ အဆီခဲဖြစ်တည်နေသည့် အပင်ကို သစ်မွှေးပင်၊ မြန်မာအခေါ် အကျော်ပင်(Agarwood) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည့် သစ်မွှေး၁၅မျိုးလုံးသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အများဆုံး ဖြစ်ထွန်းပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်လည်း အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းသည်။
၎င်းတို့အနက် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော Aquilaria Malaccensis. နှင့် Aquilaria Agallocha. မျိုးစိတ်၂မျိုးလုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ထွန်းသောကြောင့် မြန်မာ လူမျိုးများအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
သစ်မွှေး အမျိုးအစားနဲ့ မြန့်မာ့သစ်မွှေး ဆိုထားတော့ ကြော်ငြာတဲ့သဘောပဲ တွေ့ရတယ်၊
(A S) ယိုးဒယားမျိုး စိုက်ထားလို့ဗျာ၊
၃ နှစ်ခွဲ သားအရွယ်ရောက်ရင် မှိုဆေးသွင်းချင်လို့၊ ကိုဝေအောင် (Green Agarwood -စိမ်းလန်းသစ်မွှေးရောင်းဝယ်ရေး) အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသလဲဗျ ။
စိုက်ထားတဲ့ အပင်ရေ (၅၀၀) ရှိပါတယ်။
သစ်မွှေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျနော်ရေးထားတဲ့ တခြား Post တွေလည်း အကို ကြည့်သွားပါအုံးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Aquilaria Subintegra ယိုးဒယားမျိုးကို ၃နှစ်သားအရွယ်မှာ ဆေးထိုးပြီး၁နှစ်ခွဲအကြာမှာ အဆီထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အဆီထွက်နှုန်းတော့နည်းတာပေါ့ဗျာ။ အခုအကိုက ဘယ်နှစ်နှစ်သားရှိပြီလဲလို့ မဖော်ပြထားဘူးနော်။
ကျနော်က လောလောဆယ် ဆေးထိုးတဲ့ အဆင့်ကို မဆောင်ရွက်သေးနိုင်ပါဘူး။ ကျနော့်အပင်က အခု၂နှစ်ခွဲရှိပြီ နောက်၁နှစ်ခွဲလောက်မှာတော့ ဆေးထိုးမယ့် အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေလည်း အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲဆေးထိုးဖြစ်မယ်လေ။
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများက ဆေးထိုးတာကို ဆောင်ရွက်နေနိုင်ပြီဆိုပေမယ့် တချို့တွေက ဈေးများတယ်ခင်ဗျ။ ပထမဆေးထိုးခကို ၁ပင်ကို ၃၀၀၀ကျပ်ကနေ ၆၀၀၀လောက်ယူပြီး နောက်ပိုင်းအပင်ရောင်းရရင် သူတို့ကို ၃ပင် ၁ပင်နှုန်း၊ ၄ပင် ၁ပင်နှုန်း ပေးရတာတို့ရှိတယ်၊ တချို့ကြတော့ ပုပ်ပြတ်အနေနဲ့ ၁ပင် ကို ၃သိန်းတောင်းတယ်။
တချို့ကြတော့ တောတော် သက်သာတယ်။ ၁ပင်ကို ၅၀၀၀၀ ကနေ ၁သိန်းလောက်ပဲ တောင်းတယ်။
ဒါပေမယ့်သူတို့က ဆေးရည်ကို လျော့ထိုးတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီထွက်နှုန်းနည်းတယ်ပေါ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ အကို ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင် သေသေချာချာစဉ်းစားလို့ရအောင် အချက်တွေရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
မှိုဆေးရည် ၁လီတာကို ၃၀၀၀၀ကနေ ၅၀၀၀၀ကျပ်လောက်ရှိပြီး ၁ပင်ကို ၁လီတာခွဲကနေ ၂လီတာလောက်ထိထည့်ရတယ်။
ကျနော်က ကိုယ့်အပင်တွေကို ဆေးသွင်းရင် ကျန်တဲ့ မိတ်ဆွေအပင်တွေနဲ့ အကိုတို့လို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပါ ဆေးထိုးပေးဖို့ အစဉ်အစဉ် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျရင် အကိုတို့အနေနဲ့ ဆေးဖိုးစိုက်၊ ကျနော်ဘက်က နည်းပညာနဲ့ စက်ဖိုးစိုက်ခ တပင်ကို ၁၀၀၀၀ပဲ ကျနော်ယူမယ်။ ဒါက ကျနော့်ဘက်က လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ဟာကို ပြောတာပါ။ အောက်မှာ သတင်းအချက်အလက်တချို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။